Shirweynaha xisbiga Shuuciga Shiinaha iyo faafreebka - BBC News Somali
17 Oktoobar 2017
Image caption Maxaa dhihi kartaa, maxaadan dhihi karin Shiinaha?
Haddii aad koontaroosho wada xiriirka bulshada, waxaad koontarooli kartaa qaabka ay dadku u fikiraan iyo sida ay u dhaqmaan. Waa arrinta ay xukuumadda Xi Jinping ku xisaabtamayso, waana arrin aan si dhab ah looga sal gaari karin xilli kasta, isu imaatinnada siyaasadeed mooyee.
Shirweynaha xisbiga shuuciga oo la qabto shanti sanaba hal mar ayaa todobaadka soo socda furmi doona: waa kulan isu keena kooxda noqon doonta hogaanka cusub ee ka dambayn doonta xoghayaha guud, Xi.
Sidaa darteed, faafreebka ayaa loogu tala galay in wax lagu xannibo, dhinaca kalena wixii ay xukuumaddu rabto lagu baahiyo.
Waxa la eegayo ayaa ah erayo muhiim ah iyo kalmado isku xiran oo loo isticmaalo baraha bulshada. Wax kasta oo loo adeegsan karo banaanabax ama jeesjees lagula kaco saraakiisha sare ayaa la xannibaa, waxaana cidda soo qorta si fudud uga warhelaya maamulayaasha.
Tusaale ahaan, farriin xambaarsan magaca hogaamiyaha dalka ugu awoodda badan, ama neynaasta lagu xanto ee ah "Winnie the pooh" (小熊维尼) ayaan si sahlan ugu kala gudbi karin dadka ku wada sheekaysta app-ka farriimaha la iskugu diro ee WeChat.
Sidoo kale, sawirrada gacan ku samayska ah ee muujinaya Mr Xi ama hogaamiyeyaashii shiinaha ee isaga ka horreeyey ayeysan si sahlan isugu diri karin dadka farriimaha koox-kooxda la isugu diro ku sheekaysta.
Lahaanshaha sawirka AFP/WEIBO
Image caption Magacyo ay ka mid yihiin Xi Jinping, Barack Obama, Winnie the Pooh iyo Tigger ayaa la faafreebay
Shiinaha dhan kasta oo la eego waa mujtamac u muuqda mid furfuran. Magaalooyin wada dhalaalaya, filimo sidii kuwa Hollywood oo kale ah oo lagu xayeysiiyo meelaha basaska laga raaco, lacagaha digital-ka, iyo arrimo kale ayaa jira oo u eg in dalku yahay mid casri ah.
Sidaasoo ay tahayna, tan iyo markii uu shan sano ka hor awoodda qabtay Mr Xi, waxaa aad loo faafreebay doodaha dadweynaha si loo xakameeyo wax kasta, min feker siyaasadeed ilaa iyo hawlaha gaarka ah ee guryaha dhexdooda.
Image caption Calaamadda Cayaarihii Olombigga ee Shiinaha 2008
Ka hor intii aan la qaban cayaarihii olombigga ee 2008, xorriyatul qowlku wuxuu u muuqday mid soo fiicnaanaya.
Shuruuc cusub ayaa u ogolaanaysay wariyeyaasha ajaanibta ah inay waddanka dhex mari karaan ayagoo aan ruqsad gaar ah ka qaadan dawladaha hoose. Xataa lama xannibin waxyaabaha Google laga raadiyo.
Laakin iminka xaalku sidaas ma aha. Halkii ay dhamaan dadku internetka ku xirnaan lahaayeen, waxay ku xiran yihiin Intranet oo ah mid la maamulo oo aan dhaafsiisnayn xayndaabka gidaarka weyn ee Shiinaha.
Baraha Internetka sida Amnesty International, Facebook, iyo Twitter ma aha kuwo ay wada gaari karaan dadka Shiinaha ah, haddii aysan isticmaalin wax la yiraahdo VPN oo u saamaxaya inay hareer maraan Internetka ay dawladdu maamusho. Taasna xukuumadduu amar ayey ka soo saartay ku socda shirkadda Apple oo ay ku farayso inay ka saarto dukaamadeeda shiinaha ku yaalla oo dhan VPN-ka.
Apple way u hogaansantay, laakin Google oo amarkaas oo kale la siiyey ma aysan fulin, sidaa darteedna waa la xannibay.
Image caption App-ka la yiraahdo Wechat ayaa aad looga isticmaalaa Shiinaha
Ma aha wax sir ah in in wargays kasta oo Shiinaha ka soo baxa iyo TV kasta uu hoos tago koontaroolka xisbiga shuuciga.
Sannadkii hore markii Mr Xi uu booqday wargayska maalinlaha ah ee shacabka, wakaaladda wararka ee Xinhua iyo TVga CCTV wuxuu ka dalbaday inay daacad u noqdaan oo ay addeecaan hogaanka xisbiga ee dhinacyada 'siyaasadda, fikirka, iyo ficilka'.
Haddaba haddii aysan ka warhelin suxufiyiinta qaarkood, waxaa jira qoraal qeexaya sida loo tabinayo wararka shirweynaha sannadkan, waxaana ka mid ah in dhamaanba waraysiyada lala yeesho khubarada iyo aqoonyahannada ay ansixiso waaxda dhexe ee borobagaandada.
Wargayska af-Ingiriiska ku soo baxa ee maalinlaha - China Daily - ayaa maalin kasta bogga hore ku soo qora sheekooyin taxane ah oo ku saabsan booqashooyin uu Mr Xi ku tago tuulooyin iyo magaalooyin oo uu talooyinkiisa u gudbiyo.
Image caption Warbaahinta badankeed waxay qoraan amaanta Mr Xi
Waxaa ka mid ah "wuxuu dadka weydiistay inay ilaaliyaan harada", "madaxweyne Xi oo soo jeediyey in dadka laga raro tuulooyinka oo loo raro deegaanno cusub" "Xi oo diiradda saaray muhiimadda in kaymo la beero" iyo kuwo kale oo la mid ah.
Dadka qaar ayaa si kaftan uu ku jiro u dhahaya in tabinta noocaas oo kale ah aysan waxba kaga duwanayan tan warbaahinta Kuuriyada waqooyi oo mararka qaar hogaamiyeyaashooda ku tilmaanta sidii inay 'ilaah' yihiin.
Si kooban haddii loo yiraahdo, faafreebka Shiinaha wuuu shaqeeyey, xukuumado badan oo dunida ka jirana si aan dhib ku jirin ayey arkaan.